एनआरएनए आईसिसीका सय दिन र मेरो अनुभव | nrn एनआरएनए आईसिसीका सय दिन र मेरो अनुभव | nrn
Content View Hits : 35808687
Written by Bhagawati Basnet, Patron, NRNA Israel
Sunday, 24 January 2016 16:46
Exclusive:4photos: इजरायल- बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको साझा संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए आईसिसी) को नयाँ कार्य समितिको पहिलो सय दिन पुरा भएको छ । उक्त समितिले यो सय दिनमा भूकम्प पिडित नेपाली जनताको राहत र पुरोत्थानमा उल्लेख्नीय कार्य गरेको जगजाहेर छ । तर अहिले संस्था आन्तरिक नेतृत्वको खिचातानीमा फँसेको अवस्था पनि छ जसले गर्दा बिश्वभरका एनआरएनहरु दुई खेमामा बिभक्त हुने स्थिती सृजना भएको छ, जुन संस्थाको इतिहासमा अत्यन्त दुखद घटना हो भन्ने मलाई लागेको छ। विश्व सम्मेलन गत १४–१७ अक्टुबर २०१५ मा सम्पन्न भएको थियो । बिभिन्न देशहरुबाट आएका करिव १२ सय प्रतिनिधिहरुले आफ्नो अभिमत दिएर मतदान गरे त्यो सबैको अधिकारको कुरा थियो । त्यस सम्मेलन रुपी रणभूमिमा म पनि एक पदको प्रतिष्पर्धि भएर होमिएकी थिएँ । मैले मध्य पूर्व एशियाको प्रतिनिधित्व गरेर यो क्षेत्रको समस्यालाई आईसिसीको नेतृत्वदायी तहमा पुगेर उजागर गर्ने इच्छा जाहेर गरेकी थिएँ । तर मेरो उम्मेद्वारी डलर, पाउण्ड, युरो र यानको अगाडी फिक्का बन्न पुग्यो । र म पराजित बन्नु पुगें । कामको मुल्यांकन भएको देखिएन । सामाजिक समाबेसिक र समानुपातिककरणलाई डलर, पाउण्ड, यन र युरोमा सिमित राखेको देखियो । मध्यपूर्व (मिडिल इस्ट) लगायत बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई तल्लो दर्जाको एनआरएनको संज्ञा दिईने रहेछन् । यो एनआरएनएको स्थापनकालदेखिको परम्परा रहिआएको छ र कायमै रहेको देखियो।
NRNA Israel Patron and author Bhagawati Basnet. Photos courtesy: Bhagawati Basnet
सम्मेलन भब्य र ज्ञानवर्धक
नेपालमा भैरहेको नाकाबन्दीको बावजुद पनि ग्लोबल सम्मेलनको तयारी भव्य थियो । यस विश्व सम्मेलनमा संसारभरीबाट सहभागी हुन् आएका प्रतिनिधिहरु र नेपालका विज्ञहरु बिचको छलफल, बहस आकर्षक र ज्ञानबर्दक थियो । विभिन्न बिषयमा भएका वादविवाद छलफलले रौनक छाएको थियो । नेपाललाई कसरी समृद्ध बनाउनेदेखि लिएर एनआरएनए दैनिक संचालनको नीति नियम र भविष्यको मार्ग निर्देशन गर्ने विधान संसोधन, महिला, बालबालिका तथा अग्रजहरुको सम्मान सत्कारको कार्यक्रम पनि आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमहरु अति व्यवस्थित र समय सान्दर्भिक बिषय बस्तुहरुमा केन्द्रित थियो । यस सम्मेलनमा धेरै अग्रजहरु, एनआरएनएका संस्थापक व्यक्तित्वहरु, एनआरएनएका अभियन्ताहरुसँग साक्षात्कार हुने सुनौलो अवसर पनि जुट्यो ।
चुनाव र गुटबन्दीको फोहोरी खेल
चुनावका सन्दर्भमा भने एनआरएनएको चुनाब हेर्दा एउटा परोपकारिक सामाजिक संस्थाको चुनाब भएको नभएर नेपालको संसद्को चुनाब जस्तै खर्चिलो र भड़किलो लाग्यो । एनआरएन सातौं बिश्व सम्मेलन स्थल पाँच तारे सोल्टी होटेलको प्रवेशद्वारदेखि नै बेहुलीझैँ सिंगारिएको थियो । साथै चुनावी माहोल तातिएको थियो । सबैले चुनावका लामालामा प्रतिबद्दता, योजना र कार्यक्रमहरु बाहिर लिएर चुनाब प्रचार प्रसारमा लागिरहेका थिए । यही चुनावी माहोलमा एनआरएनएका अग्रजहरु पनि गुटबन्दीमा लिप्त भएको देख्दा मलाई अलिक अनौठो र नमज्जा लाग्यो । कसलाई आफ्नो र अर्काको भन्ने भनाउने र जसको शक्ति उसैको भक्ति भन्ने राजनितिक फोहोरी खेलको पटाक्ष्यप हाम्रै आँखा अगाडी भयो । को कति सच्चा र ईमान्दार रहेछन् भन्ने थाहा पाउन चुनाबी रणभूमिमा होमिनु पर्ने रहेछ । अहिले एनआरएनए केन्द्रको लडाई गुटबन्दीको भएकाले “एनआरएनको चुनावमा सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको” भन्ने जुँगाको खेल मात्र हो, हामी सबै सर्वासाधरणले बुझिसकेका छौं । चुनाबको समयमा तँलाई यो बनाई दिउला, मलाई साथ सहयोग र समर्थन गर भनेको मैले मेरै आँखाले देखेको दृश्य अझै ताजै छ । त्यो लेनदेन, धोकाबाजी र ठुलो बैमानी ट्याक्टिसको लडाई देखियो । जिन्दाबाद र मुर्दाबादका नाराहरुले अझै कान गुञ्जिएका छन् । नाताबाद, कृपाबाद, जातिबाद, धर्मबाद, क्षेत्रवाद र नेपाली राजनीतिक भागबन्डाले अभिप्रेरित एनआरएनएमा आफू बिसुद्ध एनआरएन भएर चुनाबमा आएको "नेपालीको लागि नेपाली र नेपालको लागि गैरआवासीय नेपालीहरु" भन्ने भावना ओझेलमा परेको देखेर सर्वसाधारण एनआरएनहरु धेरै चिन्तित भएको देखियो । कामको मुल्यांकन भएको देखिएन । सामाजिक समाबेसिक र समानुपातिककरणलाई डलर, पाउण्ड, यन र युरोमा सिमित राखेको देखियो । बैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई तल्लो दर्जाको एनआरएनको संज्ञा दिईने रहेछन् । यो एनआरएनएको स्थापनकालदेखिको परम्परा रहिआएको छ र कायमै रहेको देखियो ।
एनआरएनमा राजनीतिकरण गर्नु हुदैन भन्ने बिधान छ। एनआरएनएका नेताहरु बोलीले आदर्श छाटछन् । ठुला ठुला कुरा गर्छन् । तर चुनावमा होमिनु अघि राजनीतिक नेताको खुट्टा समाउदै उपहारका पोका र नोटका बिटा बोकेर नेताहरुका घर घरमा चाहारेको पनि आफ्नै आँखाले देखियो । पावर, पैसाबिना एनआरएनएको कार्यसमितिको पदाधिकारी बन्ने कोशिश भूलले पनि नगर भन्थे, भुक्तभोगीहरुले भोगी सकेको त्यो यथार्थता भोग्नु पनि मेरो पहिलो अनुभव रहयो । एनआरएनएलाई राजनीतिकरण गर्ने पार्टीका शीर्ष नेताहरुसम्म चुनावीस्थलमा आएको दृश्य मेरो मेरो मानसपटलमा अझै कैद छन् । धेरै आदर्श छाट्नेहरुको प्रत्यक्ष क्रियाकलाप नजिकबाट नियाल्ने अवसर पनि जुट्यो ।
मेरो सामाजिक र साहित्यिक संलग्नता
म भूँईफुट्टा उम्मेद्वार पक्कै थिईन् । समाजमा केहि गरेकै भएर उम्मेद्वारी दिएकी थिएँ । बैदेशिक रोजगारमा म १० बर्षदेखि इजरायलमा कार्यरत छु । नेपालमा छँदा १० बर्ष शिक्षण पेशामा आबाद्द थिएँ । बैदेशिक रोजगारको क्रममा इजरायलमा बस्दा मैले बिभिन्न संघ संस्थामा काम गरिरहेको छु । सामाजिक संस्थासँग सम्बन्धि कार्य संगसगै नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति सम्बन्धित संस्थाहरुमा आबद्द भएर काम गरिरहेको छु । अन्तराष्ट्रिय कलाकार समाज ग्लोबल समितिको महासचिव भएर एक कार्यकाल काम गरें र अहिले उपाध्यक्ष छु । अन्तराष्ट्रिय साहित्य समाज केन्द्रिय समितिमा २ कार्यकाल काम गरिसकेको छु । म एनआरएनए पूर्व आइसिसि सदस्य र हाल एनआरएनए संरक्षक इजरायल छु । आफ्नै संयोजनमा डायस्पोराका सर्जकहरुको बिबिध विधाका पुस्तकहरु प्रकाशित गरिसकेको छौं । मेरो आफ्नै तीनवटा बिबिध विधाका पुस्तकहरुलगायत दर्जनौ संयुक्त संग्रहहरु प्रकाशित भएका छन् । दश बर्षको एनआरएनएको अभियानमा एनआरएनएले गरेका केहि राम्रा कामहरुको सर्हाना गर्दै मैले पनि धेरै कार्यक्रमहरुमा सहभागी बन्दै आएकी छु ।
कारणका लागि थियो मेरो उमेदवारी
दश बर्षको दौरानमा आजसम्म इजरायलमा एनआरएनए आईसिसीका कुनै प्रतिनिधि आएर यहाँ कार्यारत नेपाली महिलाहरुको समस्याबारे बोलेको थाहा छैन । साउदी अरबमा घरेलु हिंसामा परेका नेपालीको उद्दार भएको छैन । कुबेतमा घरेलु कामदारहरु जेलको काल कोठरीमा सडिरहेका नेपाली महिलाको कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन । कतार, दुबइ र खाडी मुलुकहरुमा पनि कुनै प्रतिनिधि गएर राम्रो काम गरेको कुरा एनआरएनएको इतिहासले देखाउन सक्दैन । ती सबैको नेतृत्व गर्न खाडी मुलुकमा जाने महिलाहरुलाई अवसर दिनु पर्छ भन्ने उदेश्यले मैले पनि आफ्नो उमेदवारी दिएको थिएँ । तर पैसा र भिषाको कारण देखाएर अनेक बहानामा हतोत्साहित बनाइयो । हामी नेपाली पासपोर्ट हुने दुबइ, कतार भएर नै नेपाल जान्छौं तर एनआरएनएको चुनावमा भने इजरायलमा काम गर्ने महिलाले अरु देश जान सक्दैन भन्ने अफवाह फैलाईयो । कामदारको रुपमा जुन व्यक्ति त्यो क्षेत्रमा काम गर्न जान्छ उसलाई मात्र त्यसको बारेमा थाहा हुन्छ तर एनआरएनएका पदहरु सधै पहुँच हुने युरोप अमेरिका, जापान, रसिया तिरका मानिसलाई मात्र दिईन्छ ।
मैले हामी बैदेशिक रोजगारमा काम गर्नेहरुको करारमा भिषा भएको हुनाले हामीले आफूले काम गरेको क्षेत्रमा के कसरी काम गर्ने भन्ने बिषयमा सोचेकी थिएँ । त्यसैले मैले महिला उप संयोजकमा उमेदवारी दिएको थिएँ । महिला उपसंयोजक दुइ पटक युरोपबाट भएकोले एक पल्ट खाडी मुलुकबाट एनआरएनएको महिला प्रतिनिधि भएर काम गर्न सोचेको थिएँ तर पैसा र भिषाको समस्या देखाएर अग्रजहरुबाटसमेत हतोत्साहित बनाउने काम गरियो । एनआरएनए ईजरायलको साधारण सदस्यदेखि संरक्षक, चुनाब आयुक्त, आईसीसी सदस्यसम्म भएर काम गरेको अनुभवको प्रमाण मसँग अझै छ । मेरो कामको मुल्याकन होस् भन्ने धारण मैले राख्न चाहेकी मात्र थिएँ । नेपालमा रेमिटेन्स पठाउने, शारीरक मानसिक रुपमा विक्षिप्त बनेर काम गर्ने, मेहिनेत गर्ने पैसा पठाएर नेपाल सम्पन्न बनाउन खाडी मुलुकमा काम गर्नेहरु नै हुन् । चुनाव पछि एनआरएनए सधै विवाद सिर्जना हुने परम्पराको अन्त्य हुनु पर्ने हो भन्ने मलाई लाग्दछ । बैदेशिक रोजगारमा जानेहरु एनआरएनएको सदस्यता लिन पाउने नियम भएतापनि सदस्यतामा हरेक बर्ष कमि आउदै जाने गरेको छ । किनकि यति महँगो र खर्चिलो ठाउँमा खाडी र मलेसियामा काम गर्ने कामदारहरुको पहुँच पुग्न अत्यन्तै कठिन छ ।
संस्थाको परोपकारी छविलाई बचाउनु पर्ने बेला
भ्रष्ट राजनितिज्ञ, भ्रष्टाचारी कर्मचारिहरुको कालो धनलाई सेतो बनाउने माध्यममा लागेका अपराधीहरुले एनआरएनएको पबित्र नामलाई देशलाई कंगाल बनाउन बिदेशमा पैसा राख्ने देश द्रोहीसित् साठगाँठ भएको अहिले देखिन आएको कुरा समाचारमा पढदा दुख लाग्छ । भिजिट भिसा र कलाकारको नाममा युरोप अमेरिका लाने, लाखौ पैसा लिएर मानब तस्करी गर्ने अपराधीहरुले नेपाल र बिदेशमा बस्ने हामी एनआरएनहरुको पबित्र संस्थाको नाम धमिलाउँदै छन्। यसबाट हाम्रो साझा संस्थाको परोपकारी छविलाई बचाउनु पर्ने भएकोछ ।
हामी मध्यपूर्वमा काम गर्नेहरुको कुनै समस्याको समाधानको लागि सम्बन्धित सरोकारवाला एनआरएनएले पहल गरेको कुनै जलन्त उदारहण हामीले देख्न सकेका छैनौं । यस क्षेत्रका कामदारका लागि त्यस्ता कार्य योजनाहरु पनि हामीलाई याद छैन । एनआरएनएलाई नेपाल सरकारमा दर्ता गराउन पर्दा हामी बैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरुलाई देखाउने हात्तिको दाँत काम आयो ।
सोल्टी होटेलको लबीमा १४ तारिक राति बेलुका अनेक बिकृति प्रत्यक्ष हेर्न पाइयो । यो दृश्य धेरै घृणा लाग्दो थियो । सोल्टी होटेलमा डलरमा भोट बिक्रि भैरहेको मैले मात्र हैन, तमाम मान्छेहरुले देखेका छन् । एनआरएन हुनुमा हामी आफैले लज्जित हुनु पर्ने हुन्छ यदी यो कार्यमा सम्मिलितहरुको सयममा फोटोसहित नाम सार्वजनिक गरिदिने हो भने । त्यो एक दिन मैले गर्ने नै छु । त्यस्ता विकृतीको अन्त्य भएपछि मात्र हाम्रो साझा र छाता संस्थामा योग्य, क्षमतावान, कार्यकुशल नेतृत्वको विकास हुने मैले विश्वास गरेकिछु ।
यसपालीको सातौं ग्लोबल सम्मेलनमा मेरो दोश्रो सहभागिता थियो । आफू प्रतिनिधि भएर जानु र आफू प्रतिस्पर्धी भएर जानुका छुट्टाछुट्टै अनुभवहरु बटुलें । सम्मेलन मेरा लागि अविस्मरणीय रह्यो । सम्मेलनबाट फर्के पछि पनि एउटा प्रश्नले भने संधै घच्घच्याई रह्यो- "के एनआरएनए हामी जस्ताकालागि पनि हो ?"
संरक्षक, एनआरएनए इजरायल
उपाध्यक्ष, अन्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज ग्लोबल
पूर्व सदस्य, एनआरएनए आइसिसि
१. रहर भो जिन्दगी (गज़ल संग्रह, २०११)
२. प्रेम दह (मुक्तक संग्रह, २०१४)
३. मर्दको माया (कथा संग्रह, २०१५)
-एनआरएन आईसिसीले सुरु गर्‍यो अन्तराष्ट्रिय अभियान- "#नेपालहोप्स: हामीलाई जस्तो तिमीलाई नपरोस्"
-एनआरएन आईसिसीद्वारा "#नेपाल होप्स" अभियानको शुरुवातका साथ नेपाल सरकारलाई औसधी हस्तान्तरण
-NRNA 7th Global Conference concluded: नेपालका ४ प्रधानमन्त्रीहरू एनआरएन आईसिसी ७ औं विश्व सम्मेलनमा
-एनआरएनए आईसिसी अध्यक्षमा पुनः शेष घले निर्वाचित; को कस्ले कति मत ल्याए ?